UMnyaka woMlilo woMlilo uya kuba uvavanyo lokunyaniseka kwiibini ezininzi. Abo baxhomekeke ngokwaneleyo ukuvavanya uvavanyo, baya kucela inkxaso yophawu lwe-2017. Abathandi bobubini bobabini bamele balungiselelwe ukuba iimfihlo zabo ziya kuba zikarhulumente. I-rooster iyakuthandeka kulabo abaphulaphulayo iimvakalelo zabo, beshiya ukubala okubanda. Abantu abaninzi banesizungu baya kufumana ulonwabo. Ababini baya kucinga ngokukongeza.
I-Aries iya kubonakala ekuqaleni kwe-2017. Iinyanga ezintathu zokuqala zibonakaliswe ngqungquthela yeenveveli ezidibanisayo kunye nemicimbi yothando. Ukusondela kumgangatho we-spring Aries uya kuba nako ukukhetha iimfuno zabo kwaye bayeke ukukhetha iqabane elinye. Umnyaka we-Cock Cock ulungele imitshato. Kungenzeka ukuba abaninzi abameli balo mqondiso baya kubeka ubulili ubuhlobo kwaye bacinge ngokuzalwa kwabantwana. I-Aries yooNtsapho iza kusinda kwiinkxalabo zobudlelwane, obuya kuhlala kude kube yindla. Imingxabano yepropati engenzekayo phakathi kwabatshatileyo.
I-Taurus yonke unyaka ayiyi kubhala ingqalelo. Abamele bodwa boluphawu lweZodiac baya kufumana isiqingatha sesibini. Abo baye bahlala bephupha ukuqala ubudlelwane nomntu othile, baya kufezekisa okufunayo ngokuphakamileyo. Iintsapho zeNkwenkwezi ziyacetyiswa ukuba zithintele. Ukungafuni ukuphazamisa nokukhusela iimfuno zakho kuya kubangela ukuxabana okuqhubekayo. Kwisiqingatha sesibini sonyaka, imeko iya kuba yimbi kakhulu xa elinye iqabane lingabonakali.
Uthando nobomi bomntu ngo-2017 kuza kufaka phambili, uphendule umsebenzi kunye nomsebenzi. Ulwalamano lukaGemini luya kusinda ukuvavanywa kwamandla. Umnxeba wencwadana efana neyomkhulu, eya kuqhubeka ukuphela kwonyaka. Ubomi bentsapho buya kuzinza. Imibuzo kunye nokungavumelani kuya kwenzeka entwasahlobo. Iinkwenkwezi zinconywa ukuba ziphulaphule iingcebiso zezihlobo ezidala. Ekwindla, imeko iya kuzinza ukuba iGemini ingakwazi ukunqoba ukuzingca.
Izibini ezingaqinisekanga ziya kusinda uvavanyo lwangempela lwamandla. Ngethuba eliphezulu, iCancer igqiba ukugqiba ubudlelwane obudlulileyo kunye nokutshintshela into entsha yenkanuko. Ubomi bentsapho akukho zityholo ezilindelekileyo. I-Dyspnea mood ingabangela iingxaki kubantwana kuphela. Amagciwane kufuneka alandele ukutshutshiswa kwaye anciphise uxinzelelo kumalungu entsapho ukuze angabhubhisi inkqubela. Ukuba ulawula ukuthatha imizwa elawulwayo, umoya ohlala kwintsapho uya kuzinza kwaye ulungile kulo nyaka.
Umnyaka we-Firecracker uye waletha izinto ezininzi ezixhamla kwiiNgonyama kwintsimi yothando. Imikhosi yeentloba ezenzekayo ezinobungakanani, iinkonzo zentsebenzo kunye nokuqhagamshelana nabalingani abatshatileyo. Akunakunyulwa ukuba kwisiqingatha sokuqala sika-2017 intlanganiso enomdla iya kwenzeka kunye neqabane elizayo. Intsapho Iingonyama ziya kuba nexesha lokuvisisana kunye nokuqonda okupheleleyo. Iingxaki ezikhoyo ziya kuzincuma. Iingonyama zinokuxhomekeka kwinkxaso yesiqingatha sesibini.
Ngo-2017, impilo kaBrigo iya kuba yinto engalinganiyo, egcwele ithemba kunye nokudumala. Ukususela ngoJanuwari ukuya ku-Ephreli, kunokwenzeka ukupholisa iimvakalelo kulwalamano. Mhlawumbi ukubonakala komntu okwexesha elidlulileyo, eliya kuba nekhwele eliqinileyo lezesondo. Ulwalamano olude lwexesha elide lungcono ukungabala, iimvakalelo ziya kupheliswa kude kube sekupheleni konyaka. Intsapho ye-Virgo iya kuba nzima kubafundi abathandayo, kunokubangela ukungaqondi phakathi kwamalungu entsapho. Ngokukufutshane ekwindla, ubunzima kubantwana banokwenzeka. Iinkwenkwezi zincoma ukubonisa umonde nokuthatha inxaxheba.
Unyaka we-2017 walungiselela uluhlu lweemvavanyo zeLibra. Ixesha elona kunzima kakhulu liya kufikelela ekupheleni kukaMatshi - ekuqaleni kuka-Apreli. Abameli balo mqondiso we-Zodiac baya kuthukuthela kwaye bahluthe, okuza kubonakalisa ngoko nangoko ubuhlobo kunye neqabane. ILonely Libra inethuba lokubetha ubudlelwane ehlobo. Kungenzeka ukuba ivelidi iya kwenzeka kwiholide okanye ngohambo. Kwintlanano yentsapho, iqela lesithathu lingabonakala, kodwa uxhumo aluyi kuba lude. Ekwindla, ezininzi iintsapho ziya kuqwalasela ukungongeza kwintsapho.
Ukwakha ulwalamano olutsha luya kuba ngumngeni kubaScorpions. Kodwa ukuba intshayelelo iqalisa, kuya kukhula ibe yintlambo eqinileyo. Ngeengxaki zombini, imeko iya kuba nzima kwaye iholele ekugqibeleni kokugqibela. Ingqungquthela yeengxaki iya kuba entwasahlobo. Iiforpios ziya kuba zingabonakali kwaye aziyi kufuna ukuphazamisa. Akuyiyo yonke into eya kuhamba kakuhle emtshatweni kunye nasebudlelwaneni nabantwana. Abanye abameli balo mqondiso we-Zodiac baya kuthatha isigqibo sokuqala ukulungiswa kwamanqanaba amakhulu, okuya kubangela ukutshatyalaliswa okutsha kweengxabano.
Abaninzi bamaSagittarians 2017 baya kuqala ngezimanga ebomini bakhe. Ubuhlobo obusondeleyo buya kuba yintando. Abameli balo mqondiso we-Zodiac baya kubhalwa ngabantu abanomdla. Ukungabikho kwengqwalasela akuyi kuba yinto echanekileyo. I-Lonely Sagittarius inokungena ebudlelwaneni obuhlala ehlobo. Ubomi bentsapho, ixesha lokulindela kulindeleke. Imitshato ecaleni lomtshato iza kufumana elinye ithuba. Ukuhlangana kwakhona kwesi sibini kunokwenzeka ngoJulayi okanye ngo-Agasti 2017. Kwakhona, iingxaki ezimnandi ezinxulumene nabantwana zilindeleke.
I-Capricorns ngonyaka we-Fire Cock ilindele i-romance enhle neqhwithiyo. Ukuhlangana kunye nesiqingatha sesibini kunokwenzeka ukuba kwenzeke kwisiqingatha sonyaka. Unxibelelwano olusekelwe kwintshiseko, linalo lonke ithuba lokugeleza kumtshato ozinzile. Kungenzeka ukuba oku kuya kubangela umtshato, kodwa emva ko-2017. Ubomi bentsapho yeCapricorn iya kuba ngalingani. Abameli abaninzi balo mqondiso baya kufuneka bazisombulule iingxaki ngokukhawuleza. Kwisiqingatha sesibini sonyaka, ubunzima buya kubakho nabantwana. Iinkwenkwezi zincoma ukuba zingaliphulaphuli abanye iingcebiso zabantu, kodwa ukuba zisebenze njengengqondo.
Ukususela ekuqaleni kuka-2017, u-Aquarius uya kufakwa ekuthandweni. Abahlobo abatsha abayi kukugcina ulinde. Omnye wabo unokuhlakulela ubuhlobo obude, obuya kuzisa ku-Aquarius ezininzi iimvakalelo ezilungileyo kunye neentlobano zesini. Kwimpilo yabameli beentsapho zomqondiso, yonke into ayiyi kuba yinkomo. Isiqingatha sesibini se-2017 siya kuba nzima ngakumbi. Kuza kubakho ukupholisa kubudlelwane. Ukubuyisela ukubuyisana kwintsapho, ama-Aquariya aya kufuneka ahlolisise ukuzingca kwabo aze abonise ingqiqo.
NgeePisces, ngo-2017 aziyi kuqikelelwa. Baya kujikelezwa ngabalandeli, kodwa ekukhethweni kwabo baya kuba nako ukugqiba isigqibo esondelene nehlobo kuphela. Ulwalamano oluye lwaba lukhulile, kungcono ukuphula ngokupheleleyo. Iinkwenkwezi zikwacetyiswa ukuba zingamkeli nethemba elingenanto yokuvuselela iimvakalelo zangaphambili. Ingxaki zentsapho zinokuba nzima kwiingxaki ngezihlobo. Ngomzamo wokubanceda, i-Fishfish ingozi yokulahleka into ebalulekileyo emtshatweni wabo kwaye ichithe ubudlelwane kunye nesiqingatha sesibini.
IHoroscope ngo-2015 nge-Aquarius
IHososcope ngoDisemba 2017 - umfazi-uAries - waseTamara Globa kunye no-Angela Pearl
I-Horoscope yeTaurus-abafazi ngoDisemba 2016
IHoroscope yeentlanzi-Abasetyhini ngoJanuwari 2017
Ukuphumelela kokuhamba kwelanga
Iimfihlelo zobuhle bezempilo kunye nezempilo
Isondlo, ukutya okunempilo: yintoni eyanceda ukutya, indlela yokutya ngokufanelekileyo?
Umkhuhlane we-intestinal ekukhulelweni
Kha wuleza ukuba ufunde umntwana kumbindi
Indlela yokulawula ukwenza yonke into uze ungalibali wena?
Ukuhlamba i-New Year 2017 - ehlekisayo, ehlekisayo, emfutshane. Iingubo ezigqibeleleyo kwiinkampani zenkampani yoNyaka omtsha we-2017 Rooster
Ukucoca ulusu lobuso ekhaya
I-pizza kunye ne-mozzarella kunye ne-tomato sauce
Ioli yeKononti njenge-cosmetic yolusu